Case Packers - Delta Engineering Belzika
Archive avy amin'ny sokajy "Case Packers"
Packer case semi-automatique - isaky ny sosona
Packer case semi-automatique lafo vidy hanangonana tavoahangy poakaty ao anaty boaty baoritra. Tehirizo ny sosona (trays) maromaro ary esory eo amboniny ilay boaty na kitapo.
Ampiasaina miaraka amin'ny fonosana mahazatra VZT21X.
Published in Case Packers
Packer automatique automatique - isaky ny andalana - boaty kely
Ity fonosana boaty automatique feno ity dia fonosana tavoahangy foana ao anaty boaty baoritra hatramin'ny L 800 mm (31 ") x W 600 mm (24") x H 600 mm (24 "). Raiso tsirairay ny tavoahangy ary atsofohy ao anaty boaty mirona.
Packer automatique automatique - isaky ny andalana - boaty lehibe
Ity fonosana boaty automatique feno ity dia fonosana tavoahangy foana ao anaty boaty baoritra hatramin'ny L 1200 mm (47 ") x W 1000 mm (39") x H 1000 mm (39 "). Raiso tsirairay ny tavoahangy ary atsofohy ao anaty boaty mirona.
Packer automatique automatique - isaky ny sosona
Ity fonosana boaty automatique feno ity dia fonosana tavoahangy foana ao anaty boaty baoritra hatramin'ny L 800 mm (31 ") x W 600 mm (24") x H 600 mm (24 "). Mamorona sosona tavoahangy mifandimby, avy eo atsofohy ao anaty boaty ilay sosona feno.